တောင်သမန်သားလေး: March 2017
ဖုန်းကိုင်ထားသော ကိုကို ၊ မမ များ သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာလေးများ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံး ၏
လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု လူအများ စုဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှု လျှိုဝှက်တွေကို သိရှိသူတွေ အလွန်
နည်းပါးနေ ပါတယ်။ ကိုင်နေတဲ့လူ အများစုဟာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို အများအားဖြင့် Camera,
Music, Bluetooth, FM, Radio. Alarmနဲ့ Game အစ ရှိတာ...တွေ လောက်သာ
အသုံးပြုနေကြတာများပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီး အသုံးဝင်မှုနဲ့ လျှို့ချက် အနည်း ငယ်ကို ဖော်
ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အရေးပေါ် ကွန်ရက်ရှာရန် Keypad ကို Locked လုပ်ထား ရင်တောင်
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ 122 ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကိုနှိပ်လို့ ရတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်ဟာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ အရေးပေါ်ဖုန်းနံ ပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှု
ဧရိယာထဲ မှာရှိရင် ဒီနံပါတ် ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းဟာအနီးဆုံး ဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်ကို အလိုအလျောက်
ရှာမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနံပါတ်ဟာမိုဘိုင်း ဖုန်းရဲ့ခလုတ်တွေကို ပိတ်ထားရင် တောင်နှိပ်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဘက်ထရီ အရေးပေါ် အားကုန်ရင် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ ဖုန်းအသုံး ပြုရင်းဘက်ထရီအားနည်းလာပြီဆို
ရင်*3370# ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းတွေမှာအရေးပေါ်သုံးဖို့ချန်ထားတဲ့ဓာတ်အားကို ပြန်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်လို့
ဖုန်းမှာဘက်ထရီထက်ဝက်အား ပြန်ပြည့်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်
မိုဘိုင်းဖုန်းဘက်ထရီအားပြန်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ သာမာန်နဲ့ အရေး ပေါ်သုံး နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်
ဘက်ထရီအားကို အလိုလျောက်အား ပြန်ဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းဟာ လူအများစုအတွက်
အသုံးဝင်စေမယ့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ကားသော့ကျန်ခဲ့ရင် အဝေးထိန်း စနစ် တပ်ဆင်ထား
တဲ့ ကားအသုံးပြုသူ တွေအတွက် ကား ထဲမှာ သော့ကျန်ခဲ့ခြင်း၊ အပိုသော့တစ် ချောင်းအိမ်မှာ ကျန်ရှိနေ
ခြင်းဖြစ်ပေါ် ကြုံလာပါက မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အသုံး ပြုပုံကတော့
အိမ်မှာ ရှိတဲ့လူတစ် ယောက်ဖုန်းကို မိမိမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ လှမ်းခေါ်ပြီး တစ်ဖက်လူနဲ့ အဆက်အသွယ်ရရင်
အိမ်ကလူကို ကားသော့ ဖွင့်တဲ့ခလုတ်ကို ဖုန်းအနားကပ်ပြီးနှိပ် ခိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ ကားတံခါးပွင့်သွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ဖုန်း ကိုတော့ကား နားမှာ ထားရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းဟာ မိမိအတွက်
ပင်ပန်းမှုမရှိပဲ အဆင်ပြေစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ (၄) မိုဘိုင်းဖုန်း အခိုးခံရရင်
မိမိရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ ကျပျောက် ခြင်း၊ မေ့ကျန်ခြင်းနဲ့ အခိုးခံရခြင်းအ စရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခု
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ဖုန်းရဲ့နံပါတ်စဉ်သိဖို့ *#06# ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီအခါ မှာ
ဂဏန်း(၁၅)လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်...........။ အဲဒီဂဏန်းတွေဟာ မိမိဖုန်း ရဲ့သီးသန့်နံပါတ်တွေပါ။
ဒီဂဏန်းတွေ ကို ပထမဆုံးသိရှိထားဖို့တော့ လိုအပ်မှာပါ..............။ ကိုယ့်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နေ့မှာ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ကိုဖုန်းဆက်ပြီး ကုတ်နံပါတ်ပြော၍ ဖုန်းပိတ် ခိုင်းနိုင်ပါ တယ်။ တကယ်လို့်
ခိုးသူဟာ Simcard ကို မထုတ်ရ သေးခင် တိုင်တန်းမယ် ဆိုရင် Simcard ရော ဖုန်းကိုပါ Disable လုပ်
နိုင်မှာ ဖြစ်လို့မိမိဖုန်းထဲကဖုန်းနံပါတ် စာရင်းတွေကို တခြားသူမသိအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့Nokia ဖုန်း အသုံးပြု မယ့်သူတွေအတွက် ကုတ်နံပါတ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကုတ်နံပါတ်တွေအနေနဲ့IMEI (International Mobile Equipment Identity) ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
*#06# ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ LCD Display ကို ပိုပြီး ရှင်းလင်းပြတ် သားစွာ မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်
*#67705646# ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင် ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ဟန်းဆက်ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ Version
ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ *#0000# ကို နှိပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Blue tooth device
ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Serial Number နှင့် ဖုန်းကိုနောက်ဆုံးဘယ်အချိန် မှာပြုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအ
ရာနဲ့ ဖုန်း lifetime ကိုသိရှိလိုရင်တော့ *#92702689# ကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ မှတ်သားထားသော
ဖုန်းနံပါတ်များ ကိုချေဖျက် ချင်ပါက *# 3925538# ကို နှိပ်ပြီး ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ Series 60
ဖုန်းတွေအတွက်တော့*#737092 5538# ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းကို reset lockလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
ဖုန်းပြန်တက် လာတဲ့အချိန်မှာ defultcode 12345 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင် ဖုန်းပြန်ပွင့်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်
Application settings/Development (or) Settigns/Developer Option မှာ USB debugging mode ကို on ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ချို့ Developer Option မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Settings/About phone ထဲသွားပြီး Build number ကို လေးငါးချက်လောက် ဆက်တို
"ဖုန်း Password မေ့နေတဲ့အခါ ဖုန်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ" "ဖုန်း Password မေ့နေတဲ့အခါ ဖုန်းဘယ်လိုခေါ်မလဲ" *********************************************************** ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် Password/PIN/Pattern မေ့နေခြင်း Lock ကျသွားလို့ဖုန်းထဲဝင်လို့ မရခြင်း စတာတွေကို ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးတာတောင်မှ နီးစပ်ရာလူတွေ ကြုံဖူးတာကို မြင်ဖူး ကြားဖူးနေပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်း Password မေ့သွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် Lock ကျသွားတဲ့အခါ သင်ကလည်း အရေးကြီးဖုန်းခေါ်ဆိုရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူများဖုန်းနဲ့ခေါ်မယ်လို့ မပြောနဲ့နော်။ တကယ် ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲရောက်နေရင်တော့ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်လာမှာပါ။ Lock screen ကို မကျော်ဘဲ ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ Emergency call ကို တွေးလိုက်လားမသိဘူး။ Emergency call နဲ့ဖုန်းခေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ADB commands နဲ့ ဖုန်းခေါ်မှာပါ။ ADB မရှိသေးတဲ့သူများက ADB ကို ဒီမှာယူလိုက်ပါ။ http://www.solidfiles.com/d/01e85a0ad2/ADB.rar 451 KB ဘဲရှိပါတယ်။ ADB ကို ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် Rar ဖြည်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ အထဲမှာပါတဲ့ cmd လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာနဲ့ကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့Password မေ့နေတဲ့ ဖုန်းက USB debugging mode ကို မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင် ADB commands သုံးလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့် ဖုန်းလည်း USB debugging mode မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် ဖွင့်လိုက်ပါဦး။ Settings/Application settings/Development (or) Settigns/Developer Option မှာ USB debugging mode ကို on ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ချို့ Developer Option မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Settings/About phone ထဲသွားပြီး Build number ကို လေးငါးချက်လောက် ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Developer Option ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ USB debugging mode ဖွင့်ပြီးလို့ADB commands ရိုက်လို့ မရသေးဘူးဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Driver ကို ကွန်ပြူတာမှာတင်ပေးလိုက်ပါ။ ခုဏကဖွင့်ထားတဲ့ CMD ထဲမှာ အောက်က Commands ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ adb shell am start -a android.intent.action.CALL tel:PHNO နောက်ဆုံးက PHNO ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပေးရမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ဖုန်း Password မသိတာတောင်မှ ဖုန်းခေါ်လို့ ရသွားပါပြီ။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။ မင်္ဂလာပါ နည်းပညာ သန်းတန်ကိုလာရောက်လည်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတို့ရေ Link သေနေတာများတွေ့ရင်ကျေးဇူးပြု၍ Comment ပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။
ဖုန်းခေါ်လာရင် မအားသေးပါလို့ ပြန်ဖြေပေးမယ့် I'm busy, now. - Block spams 1.0.3.1 APK
မလာစေချင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ရွေးပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်တိုင်း မအားသေးပါ လို့ဖြေ ဆိုပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးပါ။ Call Log တင်မကပါဘဲ ၀င်မလာစေချင်တဲ့ Message တွေလည်းထည့်သွင်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 1MB သာသာထဲပါ။
I'm busy, now. - Block spams အားဒေါင်းယူရန်။
အသုံးပြုနည်း ကို အောက်လင့်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ လေ့လာကြည့်...
Facebook နှင့် Messenger မှာ အချက်ပေးသံ ပြောင်းသုံးနည်း
Facebook နဲ့Messenger မှာ စာတွေဝင်တာ Like နှင့် Comnent ပေးလို့ အချက်ပေးလာတဲ့ Ringtone အသံကို လန်းလန်းလေးထားချင်သူတွေတွက် အချက်ပေးသံပြောင်းနည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါလင့်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ လေ့ကြည့်လိုက်ပါ။
Messenger တွင် လုပ်ဆောင်ရန်
သီချင်းဆိုတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက် မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းမှာ ကာရာအိုကေဆိုလို့ရတဲ့ - Sing! Karaoke 4.2.3 APK